Latest news about Fear from Nigeria & world | TODAY.NG
Home Tags egwu
Ndị nsonazụ nke Cameroon bụ ndị nọpụrụ adịpụ na-eche nsogbu nsogbu ụmụ mmadụ ihu
Ndị Cameroon na-agbaso agha n'etiti ndị na-ekewapụ okwu nke anglophone na gọọmenti na-eche nsogbu nsogbu ndị mmadụ aka, òtù enyemaka na-ekwu ka ha na-agbasi mbọ ike ịgakwuru ndị mmadụ nọ n'ebe dịpụrụ adịpụ bụ ndị na-abawanye.
IGP Ibrahim Idris na-agbanye aka na njedebe nke ogwe aka site na 21 ụbọchị
Onye isi nyocha nke ndị uweojii, IGP, Ibrahim Idris, na ụnyaahụ nyere iwu ka ụbọchị ntinye ụbọchị 21 nyere ndị Naijiria nọ na mba ahụ ịlaghachi ngwá agha na iwu akwadoghị na ha.
Akwukwo ndi Katọlik na - agwa Onye isi Buhari okwu
Nzuko ndi bishọp Katọlik nke Naijiria onwa Thursday gwara President Muhammadu Buhari na nnukwu nnwaputa nke o weere oru na 2015 bu ihe ndi ochichi nke ochichi ya mebiri.
Ndi ukpụhọde ọzọ ọ dị nso na ụlọ ụka Naijiria?
Mkparịta ụka nke iri nke onye na-eme redio nke a maara dị ka Daddy Freeze na-eme ka ụda dị na chọọchị Naijiria. O meela otu ihe dị ukwuu n'etiti Ndị Kraịst: O meela ka ụjọ jide Ndị Kraịst ruo ọtụtụ iri afọ - ụjọ na-atụ n'ime ha ka ha ghara ịjụ ajụjụ ọ bụla ndị isi ime mmụọ na - ekwu - n'ihi egwu ịbịakwute iwe Chineke.